फोन Highscreen ओमेगा प्रधानमन्त्री एस, धेरै विशेषज्ञहरु द्वारा उल्लेख रूपमा, मूल "रंग" marketed रूसी ब्रान्ड "Vobis" समाधान को कोटीमा पर्छन्। यो मोडेल, आईटी-विश्लेषकहरूले सोचा छ अर्को "motley" स्मार्टफोन गर्न उत्तराधिकारी छ - ओमेगा प्रधानमन्त्री मिनी। म सम्म शानदार नवीनता र प्रविधी रूपमा प्राप्त? यस्तै उत्पादनहरु त्यसको मुख्य प्रतिस्पर्धी लाभ के हुन्?
विचार आधारभूत विशेषताहरु स्मार्टफोन Highscreen ओमेगा प्रधानमन्त्री एस द उपकरण दुई सिम कार्ड आकार "माइक्रो" समर्थन सक्षम छ। सुसज्जित4कोर संग Snapdragon MSM8212 मोडेल, - उपकरण चल्छ कि chipset। प्रोसेसर 1.2 GHz मा clocked छ। प्रदर्शन आकार - 4.7 इन्च। यो स्मार्टफोन एन्ड्रोइड OS संस्करण 4.4.2 नियन्त्रित छ। यो उपकरण अन्य यस्तै प्रकार सुप जस्तै सुसज्जित छ, दुई Chambers - प्रमुख (8 मेगापिक्सेल) र थप, आफ्नो स्रोत -2लाख टन। Highscreen ओमेगा प्रधानमन्त्री एस मा राम - 1 जीबी डिस्क (बाह्य कार्ड बिना) - 8 जीबी। थप फ्लैश स्मृति समर्थित रकम - 32 जीबी। यो तेस्रो संस्करण मा ब्लुटुथ उपकरण समर्थन गरिएको छ। ब्याट्रि जीवन 1750 mAh ब्याट्री छ।
कारखाना प्रयोगकर्ता उपकरण नै, हेडसेट (सामान्य, तार), बिजुली आपूर्ति, USB लागि जडान केबल, र4स्पेयर पछिल्लो प्यानल पाउनुहुनेछ आपूर्ति। सबै - विभिन्न रंग मा। त्यहाँ जो संग फोन परिमार्जन Highscreen ओमेगा प्रधानमन्त्री एस काला एक प्रकारको मा गरिएका गर्न सकिन्छ उदाहरण, काले, लागि, छन्। त्यहाँ सेतो र रातो र पहेंलो छन्। मुख्य एक कारखाना सेट उपकरणहरू पनि समावेश छन् लागि विशेषताहरू Highscreen ओमेगा प्रधानमन्त्री एस निर्देश - हामी पहिले नै "रंगीन" भन्ने तथ्यलाई उल्लेख गरेका छन्। साथै वारेन्टी कार्ड रूपमा।
को Highscreen ओमेगा विषयगत पोर्टल प्रधानमन्त्री एस प्रयोगकर्ता समीक्षा मा बायाँ रूपमा, फोन एकदम साधारण छ, तर त्यसपछि एकै समयमा राम्रो डिजाइन। स्मार्टफोन मालिक एकदम राम्रो महसुस जस्तै रंगीन सकेट हेर्न। 6.9 मिमी - धेरै सूक्ष्म शरीर को शान उल्लेख छ (अघिल्लो मोडेल तुलना - मिनी, यो आंकडा 7.8 मिमि थियो)। प्रकाश र साना यसलाई लगाएका सान्त्वना predetermining, यन्त्रको आकार पनि छन्।
समावेश रंग प्यानल औंठाछापहरू धेरै प्रतिरोधी स्पर्श गर्न सुखद एकै समयमा, पर्ची छैन रूपमा चिन्ह छन्। यस स्मार्टफोनको अगाडि को डिजाइन एक सुरुचिपूर्ण प्लास्टिक edging समावेश छ। प्रदर्शन उपकरण टिकाउ Polymeric सामाग्री को पत्र सुरक्षित छ। बाँकी प्रयोगकर्ता Highscreen ओमेगा प्रधानमन्त्री एस मूल्यांकन धेरै सकारात्मक गुणस्तर मूल्यांकन स्मार्टफोन विधानसभा समावेश गर्नुहोस्। कुनै backlash, को creaking, अंतराल छ।
थप क्यामेरा, अर्को - - गति सेन्सर र प्रकाश (लगभग) साथै आवाज वक्ता अगाडि भाग devaysa मा। सीधा स्क्रिन तल - बटन "घर", यो एक परिपत्र आकार छ। सही र यो बायाँ - प्रेस "फिर्ता" र "मेनु"। शरीर को बायाँ छेउमा मात्रा घुमाव छ। सही पक्षमा - जस्तै, तर यो शक्ति खोल्दै लागि जिम्मेवार छ। माइक्रोफोन - शरीर को तल्लो भाग मा। अडियो ज्याक र microUSB मार्फत जडान लागि स्लट - माथि। पछाडिको - फ्लैश संग मुख्य क्यामेरा।
तपाईं फिर्ता आवरण हटाउन भने, तपाईं सिम-कार्ड दुई स्लट देख्न सक्छौं। तपाईं जडान यदि तिनीहरूलाई कम्तिमा एक 2G-मोडमा काम गर्नेछ। एक वैकल्पिक microSD कार्ड को लागि एक कनेक्टर - सिम-कार्ड स्लट बारेमा। फोन को सुविधाहरू विधानसभा थप स्मृति सम्मिलित र उपकरण बन्द powering बिना सिम कार्ड परिवर्तन गर्न अनुमति दिन्छ।
डिजाइन, साथै हाते उपकरण व्यवस्थापन आधारभूत घटक विशेषज्ञहरु र प्रयोगकर्ता साधारण सराहना प्राप्त। हटाउन सकिने प्यानल सम्मिलित र धेरै सजिलै प्रतिस्थापित। कुनै पनि अंतराल र clearances नयाँ स्थापना गरेसँगै अवलोकन छैन।
हामी माथि भने जस्तै, प्रदर्शन को विकर्ण - 4.7 इन्च, यो एकदम औसत छ। तर, Highscreen ओमेगा प्रधानमन्त्री एस समीक्षा बायाँ मालिकको द्वारा प्रमाणित, स्क्रिन आकार एकदम इष्टतम छ। डिजाइन को मामला मा यो एक गाढा रंग को सामने प्यानल को पृष्ठभूमिमा धेरै शिष्ट प्रदर्शन देखिन्छ, तिनीहरूले एक तत्व मा मर्ज भने गर्न सकिन्छ। 720 X 128 पिक्सेल - स्क्रीन संकल्प पर्याप्त भने विकर्ण लागि उच्च छ। प्रति इन्च 312 अंक - डट घनत्व पनि सभ्य छ। जब यो सूचक लगभग unnoticeable pixelation छ।
स्मार्टफोन Highscreen ओमेगा प्रधानमन्त्री एस उच्च प्रविधी आईपीएस प्रविधिको म्याट्रिक्स एउटा प्रदर्शन छ, आफ्नो गुणस्तर उच्च रूपमा विशेषज्ञहरु द्वारा मूल्यांकन। एक कोण मा स्क्रिन विचार गर्दा तस्विर गुणस्तर लगभग अपरिवर्तित छ। त्यहाँ "बहु-स्पर्श" (5 छुवाइहरू सम्म) को लागि समर्थन छ, संवेदनशीलता उत्कृष्ट रूपमा विशेषज्ञहरु द्वारा अनुमान गरिएको छ। तपाईं स्वयं ब्याकलाइटद्वारा को चमक समायोजन गर्न सक्नुहुन्छ।
आफ्नो फोन मा ब्याट्री 1750 mAh ब्याट्री क्षमता छ। केही विशेषज्ञहरु भन्न रूपमा, मिनी, एकै समयमा उपकरणको प्रौद्योगिकी अघिल्लो Highscreen ओमेगा प्रधानमन्त्री एस लक्षण छैन एकदम ब्याट्री क्षमता लागि इष्टतम मोडेल भन्दा अलिकति ठूलो छ। विशेष मा, Chipset devayse पर्याप्त ऊर्जा-गहन मा माउन्ट।
विशेषज्ञहरु द्वारा बाहिर परीक्षण 6-7 घण्टा को लागि एक टेलिफोन प्रयोग हुँदा पनि, ब्याट्रि discharged गर्न सकिन्छ भनेर देखाएका छन्। यो अवधि भित्र, तपाईं आधा एक घण्टा, 120 मिनेट popolzovavshis इन्टरनेट बारेमा कुरा गर्न समय हुन सक्छ। तर, स्मार्टफोन पूर्ण संगीत प्ले को रूप मा परीक्षण withstands छ।
तपाईं मात्र खेलाडी मोडमा उपकरण प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, ब्याट्री बारेमा 30 घण्टा पछिल्लो हुनेछ। केही विशेषज्ञहरु, Highscreen ओमेगा प्रधानमन्त्री एस समीक्षा, निश्चित दर को क्षमताहरु ब्याट्री जीवन को 40 घण्टामा संगीत प्ले गर्दा (हुनत, प्रदर्शन बन्द हुँदा) परीक्षण गर्न राशि वास्तवमा। तपाईं मात्र अधिकतम चमक, उच्च संकल्प र ठूलो आवाज मा चलचित्र हेर्न भने, ब्याट्री जीवन लगभग2घण्टा हुनेछ। स्मार्टफोन 3D-माग खेल मा चलान भने, ब्याट्री लगभग 1.5 घण्टा लाग्न सक्छ। Highscreen ओमेगा प्रधानमन्त्री एस समीक्षा परीक्षण मा छाडेका सदस्य साधारण अध्ययन उपकरणको ब्याट्री प्रदर्शन त्यस्तै परिणाम पुग्यो छन्।
केही विशेषज्ञहरु लामो पर्याप्त ब्याट्री जीवन पनि एक अपेक्षाकृत ठूलो प्रदर्शन र संवाददाता संकल्प र चमक र उच्च-विपरीत प्रदर्शन सम्बन्धित हुन सक्छ भन्ने विश्वास। धेरै समान उपकरणहरू स्वतन्त्रता को एक उच्च स्तर, विशेषज्ञहरु अनुसार मा, हदसम्म, पुरानो प्रदर्शित कम गुणस्तर को उपकरणहरू लैस अक्सर प्रौद्योगिकी द्वारा हासिल छ। "Vobis" रूसी ब्रान्ड पनि फरक पथ, स्क्रीन मा सुरक्षित गर्न निर्णय गरे। यो धेरै आईटी-विशेषज्ञहरु, सही निर्णय गरेर मानिन्छ।
यो स्मार्टफोन 2G र3जी-नेटवर्क मा काम गर्न सक्छन् (तर एकै समयमा दुई सिम कार्ड जडान - मात्र पहिलो पटक)। Bluetoot, वाइफाइ - त्यहाँ आधारभूत वायरलेस संचार स्तर लागि समर्थन छ। तपाईं एक मोडेम वा Wi-Fi-राउटर रूपमा यन्त्र प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
जीएसएम-संचार को आवाज गुणस्तर, मोबाइल अपरेटर कोटिंग को क्षेत्र मा संकेत को उपयुक्त स्तर संग मोबाइल इन्टरनेट - उत्कृष्ट। काम वायरलेस मोड्युल सकारात्मक पक्षमा विशेषज्ञहरु र प्रयोगकर्ता द्वारा विशेषता छ - जडान चाँडै स्थापित छ, छैन वाइफाइ-जडान अवरोध छ।
त्यहाँ एक जीपीएस समर्थन छ - मोड्युल सञ्चालनको गुणस्तर उत्कृष्ट रूपमा विशेषज्ञहरु द्वारा अनुमान गरिएको छ। सामान्यतया स्मार्ट फोन पर्याप्त उच्च गुणवत्ता जीपीएस सक्षम संचार द्वारा विशेषता छैन - धेरै प्रयोगकर्ताहरू पनि सुखद आश्चर्य यो वास्तवमा व्यक्त गरे। उपकरण धेरै उपग्रहहरु पत्ता लगाउन सजिलो पर्याप्त छ र तिनीहरूलाई संचार।
हामी पहिले नै उल्लेख छ रूपमा फोन Highscreen ओमेगा प्रधानमन्त्री एस, सुसज्जित छ, राम को 1 जीबी। तिनीहरू वास्तवमा 500 एमबी बारेमा उपलब्ध छन्। फाइलहरू बारे 3.9 जीबी र2- - कार्यक्रम को लागि आन्तरिक फ्लैश स्मृति को राशि - 8 जीबी वास्तवमा उपलब्ध छ। यो microSD ढाँचामा थप मोड्युलहरू गरेर स्मृति क्षमता विस्तार गर्न सम्भव छ। उपकरण कुनै पनि समस्या बिना सम्मिलित कार्ड लगािन्छ।
मुख्य र अगाडि - धेरै अन्य यस्तै वर्ग सुप जस्तै, स्मार्टफोन दुई क्यामेरा संग सुसज्जित छ। 2. मा Highscreen ओमेगा प्रधानमन्त्री एस फोटो र भिडियो मार्फत - - सभ्य गुणस्तर पहिलो 8 मेगा पिक्सेल, दोस्रो एक संकल्प छ। केही विशेषज्ञहरु र प्रयोगकर्ताहरूले स्मार्टफोन, mediocre उत्पन्न मल्टिमिडिया सामाग्री गुणस्तर छलफल। तर, आफ्नो विरोधीको द्वारा उल्लेख, यो आवश्यक यसको वर्ग रूपमा, विशिष्ट हाते उपकरण देखाइएको छैन धेरै वास्तविक परिणाम हेर्न छ। र त, साथीहरूको तुलना गर्न भने, त्यसपछि। यस सन्दर्भमा मा, स्मार्टफोन एकदम प्रतिस्पर्धी देखिन्छ।
क्यामेरा संग रोलर 25 फ्रेम / दोस्रो एक दरमा रेकर्ड गर्न सकिन्छ। भिडियो, सबै भन्दा अन्य मोबाइल उपकरणहरूमा चिन्न, साथै कम्प्युटरमा फाइल ढाँचा 3GP मा रेकर्ड गरिएको छ। अडियोकोडेक रेकर्ड रूपमा 96 kbit / s, 16 kHz मा एक-च्यानल अडियो ढाँचा प्रयोग गरिन्छ प्रवाह। मुख्य क्यामेरा स्वतकेन्द्रित र फ्लैश संग सुसज्जित छ। हार्डवेयर कार्यक्षमता को मामला मा, सबै घोषणा विकल्पहरू कुशलतापूर्वक काम।
Chipset स्मार्टफोन, हामी भने छ रूपमा - यस प्रकार Snapdragon MSM8212 छ। उपकरण संग सुसज्जित छ जो प्रोसेसर, - एक उच्च-प्रदर्शन चार कोर संग Cortex-A7, 28 एनएम प्रविधी मा गरे। चिप को सञ्चालन आवृत्ति - 1.2 GHz। भिडियो त्वरक - प्रकार Adreno सफ्टवेयर इन्टरफेस मा 302. रोजगार सजिलै जान्छ, पनि प्रोसेसर र मेमोरी मा एक उच्च लोड नबुझाउन कि अपरेसन समयमा कुनै दुर्घटनाहरु।
सामान्य लोड र महत्वपूर्ण ब्रेक लगान बिना आधुनिक खेल। तर, केही विशेषज्ञहरु द्वारा उल्लेख रूपमा, ग्राफिक्स गुणस्तर छैन भन्दा आदर्श छ - विवरण तस्वीर पनि उच्च छैन। विशेषज्ञहरु यन्त्र बलियो CPU उपयोग संग गर्मी उजागर छैन भन्ने तथ्यलाई जोड। devaysa उहाँलाई जस्तै यस्तो Antutu रूपमा आवेदन र अरूलाई मदत संग विशेषज्ञहरु द्वारा आयोजित Benchmarks, सभ्य परिणाम देखाए।
तथापि, भिडियो सहायक परीक्षण - 3DMark जस्तै - धेरै भद्र परिणाम देखाएका छन्। सिद्धान्त, यो एक खेल ग्राफिक्स को कम गुणस्तर को तथ्यलाई भन्दा हामीलाई चिन्ह लगाइएको संग correlated छ। तर, Chipset प्रदर्शन प्रश्न, विशेषज्ञहरु विश्वास, हुन सक्दैन। को Snapdragon पनि अधिक महंगा खण्डहरूमा बिक्रि समेत स्मार्टफोन को संसारको अग्रणी निर्माताहरु प्रयोग गर्न जानिन्छ।
एन्ड्रोइड OS संस्करण 4.2.2 - Highscreen ओमेगा प्रधानमन्त्री एस फर्मवेयर मा स्थापित। ब्राण्ड एड-ओएस वस्तुतः अनुपस्थित छन्। हामीलाई अघि - Andriod शुद्ध। रेडियो कार्यक्रम सुन्ने लागि मिडिया प्लेयर र इन्टरफेस - यो उपयोगी पूर्व-स्थापित सफ्टवेयर बीचमा।
विशेषज्ञहरु र प्रयोगकर्ताहरूले मल्टिमिडिया अनुप्रयोग प्रयोग सजिलो, साथै उच्च गुणस्तरीय अडियो मनाइन्छ। त्यहाँ एमपी -3 मा संगीत फाइलहरू र FLAC-ढाँचा लागि समर्थन छ। पूर्व-स्थापित भिडियो प्लेयर र पनि फोटो हेर्नको लागि एक आवेदन पनि छ। उपकरण चलचित्र, एमपी3प्रकार, 3GP, र MKV प्ले गर्न सक्नुहुन्छ। वेब पृष्ठहरू र कुनै जम्छ या दुर्घटनाहरु काम गर्दा।
नियमित ब्राउजर (संभाव्यतः साथै स्थापित गर्न सकिन्छ कि भन्ने जस्तो - आफ्नो उत्पादन को मोबाइल संस्करणमा सिर्जना लामो समय को लागि उपयुक्त कार्यक्रम को एक आधुनिक विकासकर्ताहरूले) ठीक काम गर्दछ - लोड र "भारी" पृष्ठ, र भिडियो, सञ्चालन बुकमार्क धेरै सहित।
मा "Yandex" र अन्य एग्रीगेटर देखि नै स्रोत मा Google प्ले स्टोर अनुप्रयोग सम्भव devaysa गर्न थप कार्यक्रम डाउनलोड गर्नुहोस्। Android को लागि सफ्टवेयर, हामी थाह छ, लगभग सधैं समाधान को एक विस्तृत दायरामा विभाग को एक किसिम मा प्रस्तुत। महत्वपूर्ण सुरु "ब्रेकिंग" र झुन्डियो बिना स्मार्टफोन मा नयाँ आवेदन स्थापना चाँडै।
हामी हाम्रो को स्मार्टफोन Highscreen ओमेगा प्रधानमन्त्री एस अवलोकन को मुख्य विशेषताहरु अध्ययन गरेका तथापि, निष्कर्ष बिना अपूरो हुनेछ। उपकरणको indisputable लाभ बीच, कि विशेषज्ञहरु र प्रयोगकर्तालाई - सुरुचिपूर्ण डिजाइन, स्लिम डिजाइन, सञ्चालन सजिलो। धेरै स्क्रिन, उच्च-संवेदनशीलता म्याट्रिक्स प्रशंसा गर्छौं।
भने पनि ब्याट्री जीवन, जो, पाठ्यक्रम, अपेक्षाकृत शालीन छ को खर्च मा, अत्यधिक उपकरणको प्रदर्शन सराहना। तथापि, जस्तै केही मोड, मा, उदाहरणका लागि, संगीत प्ले, ब्याट्रि एकदम राम्रो परिणाम देखाउँछ।
लगभग 8 हजार rubles .. - धेरै प्रयोगकर्ताहरू प्रभावित हुन्छन् र पनि खरीद Highscreen ओमेगा प्रधानमन्त्री एस एकाइ मूल्य को वित्तीय पक्ष एकदम लोकतान्त्रिक छ धेरै प्रतिस्पर्धा समाधान लागत को पृष्ठभूमिमा विरुद्ध एकदम आकर्षक छ। निस्सन्देह, गुणस्तर र उपकरण प्रदर्शन संयोजनमा।
स्वाभाविक, को को स्मार्टफोनको "विविधता" पनि उपकरणमा सकारात्मक राय प्रचार भूमिका खेलेका छन्। फोन को सम्पूर्ण दायरा - - Highscreen ओमेगा प्रधानमन्त्री एस काला, त्यसैले पनि सेतो, पहेंलो वा रातो, यस्तो दृष्टिकोण को डिजाइन सन्दर्भमा अत्यन्तै सकारात्मक प्रतिक्रिया निर्धारण प्रयोगकर्ताको निपटान भन्ने तथ्यलाई।
सैमसंग र सोनी - टेलिफोन, विशेषज्ञहरु धेरै मान्छे जस्तै, आफ्नो खण्ड मा धेरै प्रतिस्पर्धी हुन सक्षम छ, र बाद मा उद्योग को मात्रा को असली दिग्गज छन् भन्ने तथ्यलाई बावजुद, विश्वास गर्छन्। तथापि, रूसी ब्रान्ड, विशेषज्ञहरु अनुसार, संसारमा ब्रान्डहरु oust गर्न खोजिरहेका छैन - कम्पनी को उद्देश्य "Vobis" व्यावहारिकता, राम्रो डिजाइन संयोजन र गुणस्तर निर्माण गर्ने उपकरणहरू आफ्नै, संकीर्ण आला को गठन छ।
Meizu MX4 प्रो: समीक्षा, विनिर्देशों, मूल्य
स्मार्टफोन OnePlus एक: समीक्षा
"सैमसंग 5610": विनिर्देशों, समीक्षा। "सैमसंग 5610" - फोन
तुचकोभ ब्रिज (सेन्ट पीटर्सबर्ग)। Tuchkov ब्रिज: फोटो
सबैभन्दा छोटो सामग्री "Spades को रानी"। एक गोप्य तीन कार्डहरू जीवनमै चुर्लुम्म डुबेका
"पिता र छोराहरू": Turgenev कामहरू अर्थ। उपन्यास को समस्या "पिता र छोराहरू"
को मैत्री महिला कर्मचारी कसरी अवस्थित गर्न